XUDUNTA DHAQAALAHA SOMALILAND W/Q: YASIR MOHAMOUD ABDI |
XUDUNTA DHAQAALAHA SOMALILAND W/Q: YASIR MOHAMOUD ABDI
Jamhuuriyada Barakaysan ee Somaliland waxa ay ka mida dalalka ku yaal Geeska Afrika iyo gacanka Cadmeed oo ah goob ka mida meelaha ugu straatejisan ganacsiga caalamka halkaas oo marin u ah inta badan gaadiidka bada iyo cirkaba ee isaga kala goosha bariga iyo galbeedka dunida sida shixmadaha ganacsiga. Marka laga yimaado goobta wanaagsan ee uu ku yaalo dalku waxa kale oo uu hodonku yahay khayraad faro badan oo ay ka mid yihiin Xoolaha, Macdanta, Kaluunka, Beeyada iyo beeraha.
Wax soo saarka dhaqaale ee Somaliland (GDP) waxa lagu qiyaasaa $1.5 billion, 30% Dhaqaalaha somaliland wuxu ka soo galaa xoolaha halka 20% ay ka soo galaan Tukaamda jumlada iyo tafaariiqda 8% beeraha, 6% handida maguurtada ah. Dadka reer Somaliland waxa
lagu qiyaasaa 3.5million, halka Shaqo la aanta Somaliland lagu qiyaasay inay shaqo la’a yihiin Raga 38% Dumarka 17% ( 15 to 24Jir .Hargeisa Borama Burao) (New World Bank GDP and Poverty Estimates for Somaliland, 2014)
Hadadaba intuu alleh iga gaadhsiiyo ayaa bal waxan isu dayi doonaa inaan soo koobo taariikhda dhaqaalle ee somaliland anoo adeegsanaya ama u cuskanaya xogo baadho (researches) laga sameeyay dhaqaalaha jamhuuriyada barakaysan ee Somaliland.
Taariikhda Dhaqaalaha Somaliland 1991-2000
Kadib dagaalkii qadhaadhaa ee xukunka lagaga tuuray xukuumadii milateriga ahayd ee uu hogaaminayey Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre, waxaa burbur lixaadlihi soo gaadhay dhaqaalaha Somaliland oo gebi ahaanba laga soo bilaabay xaga hoose. Dagaalka ka sokow dawladda Siyaad Barre oo ahayd shuuciyad waxay baabiisay lahaanshihii gaarka ahaa taas oo sababtay faqri wayn markii dawladdu ka baxday meesha.
Mudo kadib waxaa si fiican u hirgalay ganacsi xoogan oo xaga dhoofinta xoolaha ah kaasi oo loo dhoofinyo xoolo tiro badan dalalka Carbeed. Ganacsigaa oo ay si fiican ugu diirsadeen dadkii dagaalada kasoo doogay una noqday il soo kabasho ayna shaqooyin iyo dakhli farobadan ka heleen dad faro badan si toos ah iyo si dadbanba .
Dhamaadkii sagaashanaadkii waxay ahayd markii xoolihii ugu tirada badnaa laga dhoofiyey dekeda Berbera tan iyo intii Somaliland gooni isu taageeda la soo noqotay
Sanadkii 1997 waxaa laga dhoofiyey dekeda Berbera xoolihii ugu badnaa ee sanadkaa aduunka laga dhoofiyo hal deked 2.8 Million (Neef) ayna kasoo xerootay hanti lagu qiyaasay $84.4 million, xoolahaa oo kala yimi Togdheer Burco Yiroowe 20-25% Sool iyo Sanaag 15-20% deegaanka Somalida ee Ethiopia 45-50% halka qayb kalena ay ka timi Badhtamaha iyo Koonfurta Somalia 10-15 (Holleman, 2002)
Marka laga yimaado shaqada iyo dakhligu kasoo galayey dhoofinta xoolaha wakhtigaa wax sidoo kale dakhli wanaagsani uga soo xaroon jirey dawlada Somaliland tiirka labaad ee dhaqaalaha Somaliland oo ah lacagta ay ka soo xawilaan dadka reer Somaliland ee ku nool dalka dibadiisa, kaas oo ay lacag badani kasoo gasho dalka.
Taariikhda Dhaqaalaha Somaliland 2000 iyo wixii ka danbeeyey
Kadib markii dalka Sucuudigu ku soo rogay cunaqabatayn xoolaha Somaliland September dhexdeedii 2000 wax si weyn looga dareemay guud ahaan dhaqaalaha Somalilad gaar ahaan dadkii sida tooska iyo sida dadbanba dakhligu uga soo geli jirey iibinta iyo dhoofinta xoolaha, kuwaaso oo isugu jirey dadkii xoolo dhaqatada ahaa kuwii ganacsatada xoolaha iyo kuwii u dhaxeeyeyba.
Isbedelkan dhaqaale oo ahaa mid weyn maadaama oo Somaliland waxa keliya ee ay ku tiirsanayd ay ahayd dhoofinta xoolaha waxay sababtay:
Dad badani inay ku shaqo waayeen.
Qaar badan oo xoolo dhaqato ahaa magaalada soo galaan.
Shilinka Somaliland uu hoos u dhac ku yimi.
Dakhligii kasoo geli jirey Dawlada dekedana oo yaraadayiyo Ka ganacsiga dhuxusha oo badatay.
Wakhtigaa wixii ka danbeeyey waxaa kaalin lexaad leh ka qaatay nolosha iyo dhaqaalaha Somalilandba lacagta ay soo diraan dadka ku noolaa dalka dibadiisa taas oo u bedeshay dooorkii xoolaha, lagagana badbaaday dhibaato dhaqaale oo weyn oo ku habsan lahayd dadkii tamarta daraa ee dagaalada kasoo doogey.
Mudadaa wixii ka danbeeyey ganacsiga Somaliland oo u badan cuntooyinka, qalabka dhismaha, dharka iwm dhamaantoodba laga soo dhoofiyo dalka dibadiisa hadba marka ka danbaysa wuu sii horu marayey. Iyadoo ay soo kordheen shirkado isgaadhsiineed, kuwo dhisme iyo kuwo kale oo badan.
Hadaba waxaa marwalba biyo kama dhibcaan ah inay Dalka ka jirto shaqo la’aan baahsan, taasoo laga dareemayo meel kastoo ka mida geyiga Somaliland , da’ayartii jamacadaha kasoo baxayna ay bilaa camal yihiin, maqaaxiyaha fadhiyaan qaarkoodna kaba googoosteen dalka si ay u raadsadaan nolol dhaanta tan ay ku nool yihiin maanta oo ay uga dhex muuqan weydey inay ku gaadhi karaan mustaqbalkay higsanayeen.
Caqabadaha Dhaqaalaha Somaliland
Saylad La aanta Khayraadka kala duwan ee Dalaka sida xoolaha, kaluunka, beeyada iyo kuwa kale ee ceedhinba
Midka mida caqabadaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha Somaliland haystaa waa saylad la’aanta xoolaha oo ah khayraadka ugu badan ee dalka wakhtigan la joogo Somaliland. Tan iyo markii Sucuudigu mamnuucay xoolaha Somaliland waxa dalka soo wajahday dhaqaale xumo weyn taasoo keentay shaqo la aan iyo in ay joogsato lacag adag oo dalka kasoo geli jirtey dhoofinta xoolaha taasoo dib loogu maal gelin jirey dalka islamarkaana dad badanina shaqo iyo dakhli ka heli jireen.
Sidoo kale kaluunka oo ah mid ka mida cuntooyinka caalamka loogu isticmaalka badan yahay oo dalka Somaliland hodon ku yahay ayaa nasiib daro aanay jirin hal wadan oo caalamka ama Africa ah oo loo iib geeyo. Iyada oo dalka Ethiopia oo shacabkiisu gaadhayo sagaashan milyan aanay lahayn bad. Sidaasdarteed na uu noqon karo saylad wayn oo loo iib geeyo kallunka ay sida wayn ugu baahan yihiin.
La aanta Bangiyada Ganacsiga
Bangiyada ganacsigu waa laf dhabarta abuurida iyo maal gelinta ganacsiyo cusub oo hirgala. Maqnaanshaha bangiyo ganacsi oo dhamaystirani waxay dib u dhac weyn ku noqotay abuurista ganacsiyo waaweyn iyo yaryarba isugu jira oo dalka laga hirgelinlahaa oo s haqooyin abuuri lahaa dhaqaalaha dalkana kor usoo qaadi lahaa.
Jilicsanaanta kaabayaasha dhaqaalaha
Kaabayaasha dhaqaalahu sida wadooyinka, dekedaha , korontada iwm waxay lagama maarmaan u yihiin hirgelinta iyo ka shaqaysiinta ganacsiga. Ssida aynu wada ogsoonahay caqabad weyn ayaa ka jirta dhamaan kaabayaasha dhaqaalaha Somaliland taasoo dib u dhac ku keetay maal gashiga gudaha iyo ka debedaba .
Si looga baxo dhaaqaale xumaanta iyo fakhriga Somaliland waxa loo baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto qodobadaa aan kor kusoo xusay iyadoo la iskaa shanayo dawlad iyo shacaba.
Waxaan si kal iyo laab ah ugu talin lahaa In dawladu dedaalkeeda arimaha debeda oo dhan isugu geyso sidii ay khayraadka dalka ugu heli lahayd saylado loo iibgeeyo.
In dawladu buuxiso doorka bangiyada ganacsiyad ayna miisaaniyad sanad walba ugu darto qayb lagu maal gelinayo ganacsiyo cusub oo dalka ka hirgala iyada oo amaahinaysa lacagta dadka fekredaha ganacsiga ee wanaagsan haya, iyo inay ku sii kabaan ganacsiyadii hore u jirey.
In dawladu sii dardar geliso hawlaha ayka wado horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida wadada Ceergaabo, koronto jabana ay u diyaariso si wershadahu u isticmaalaan .
Inay dawladu tayayeeso xoolaha, kor uqaado caafimaadkooda sidoo kalena ka haqab tirto goobaha biyaha iyo baadka ayka heli lahaayeen.